WAA MAXAY SABABTA CALLA UUSAN UBAXEYNIN: DHIBAATOOYINKA KORAYA EE "QURUXDA AFRIKA" - SOOSAARKA DALAGGA
Ubaxa, oo qurux badan callas isweydaarsi Ubax ee dhirta this waa mid aad u qurux badan oo qarsoodi ah. In kasta oo xaqiiqda ah in daryeelka callae uusan u baahnayn dadaal badan, waxaa jira tiro badan oo cuduro kuwaas oo horseedi kara maqnaanshaha ubax ama dhimasho geedka. Laga soo bilaabo maqaalkan waxaad ku baran doontaa sababta dhibaatooyinka noocan oo kale ah iyo waxa ay yihiin tallaabooyinka lagula dagaallamo cudurrada callas.
Cudurada calla ee ay keenaan xaalado aan habooneyn
Calla - Si kastaba ha ahaatee, warshad aan qabyo ahayn, sida, wax kasta oo nool, waxay u baahan yihiin daryeel habboon. Xaaladaha qaldan, quruxda Afrika kuma jiri karto, helitaanka xanuun xanuun leh, muuqaal caajis leh caleemo cagaaran, ama wada baabi'iyo. Khaladaad si sax ah loo saxay ee kormeerka ubax ee ku takhasusay caawinaad, iyo waxaad ku raaxeysan kartaa quruxdiisa.
Calla lama duubayo
Waajibaad la'aanta calla ubaxa waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan iyo dhibaatada ka timaadda daryeelka aan habboonayn ee geedka. Sababaha loo yaqaan "calla" lama dalban karo waxay noqon kartaa dhowr:
waraabinta ku filan;
ma jiro waqti nasasho;
bacriminta aan habooneyn ama la'aanta.
Calla wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah (marka laga reebo muddada nasashada, marka ay soo noqnoqonayso biyo yaraanta). Waraabinta waxaa la sameeyaa maalin kasta. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa in lagu daro biyo ku sii daa lakin oo si joogto ah u buuxiyo. Biyaha waa inay jilicsan yihiin oo difaacaan, waxay leedahay saameyn faa'iido leh tayada ciidda.
Warshadu waxay u baahan tahay meel banaan. Dhar yar oo dhuuban ayaa keeni doonta xaqiiqda ah in xayawaanka aan awood u lahayn in uu ubaxdo. Dhererka weelka waa in uu ahaadaa sida in xididku uusan ka badneyn kala badhka, iyo dhexroorka waa inuu ka yaryahay kan taajkii caleemaha. Marka ay caruurtu muuqdaan, waa in laga saaraa.
Kalle wuxuu u baahan yahay waqti nasasho. Tani inta badan waa xilliga qaboobaha. Wakhtigan, caleemaha waxay bilaabaan inay qalalaan. Dheriga leh warshadda waa in loo wareejiyaa meel qabow oo marmar la waraabiyo si aan ubaxu u engegin. Muddadani waxay lagama maarmaan u tahay nidaamka xididka si uu u helo awood. Haddii ubaxu aanu qaban qaabin fasax sida, lama duubi doono. Xilliga gu'ga, wicitaanada ayaa dib loo celin karaa windowsillada waxayna dib u bilaabaan waraabinta joogtada ah.
Waa muhiim! Si loo waco calla si fiican u xoqo ka dib nasasho, waxaa lagula talinayaa in ubax la soo saaro balakoonka, loggia ama daaqada inta badan hawo qalajisa. Xitaa waa ka fiican haddii ay suurtagal tahay in la beero dhulka furan xilliga guga iyo waqtiga xagaaga.
Warshad waa in la quudiyo Bacriminta fosfate-potassium. Haddii uu jiro caleemo badan oo ku saabsan calla, si kastaba ha ahaatee ma jiro ubax, waxaa loola jeedaa in ay jirto nitrogen ka badan bacriminta. Wixii wacitaan ubax wanaagsan u baahan tahay fosfooraska ku filan iyo a potassium yar.
Jahwareerka caleenta caleen
Caleemaha caleemaha iyo jilicsanaanta caleemaha caleenta badanaa waxay u dhacaan sababo caafimaad darro ah. Iskudhisanaanta petioles waxaa sababa la'aanta nafaqooyinka carrada. Iyadoo la'aanta nitrogen iyo caleemaha potassium noqday cirro iyo hoos u dhaco.
Dhibaatadu waxay kaloo dhici kartaa sababtoo ah waraabka aan habooneyn: qadarka xad dhaafka ah ama la'aanta qoyaan. Leaf petioles waxay noqon doontaa mid jajaban, xaaladaha dhirta waxaa lagu dhejiyaa qorraxda tooska ah ee qorraxda.
Ma taqaanaa? Inta lagu jiro nasashada nasashada, caleemaha dhammaan noocyada callas, marka laga reebo caddaan, u noqdaan huruud iyo qalalan. Cuntooyinka quruxda cad waa kuwa keliya ee caleenta cagaaran ku badanaa xitaa xilliga jiilaalka.
Si xoog leh u fidiyo afkoda
Calla ma jecla tirada badan ee iftiinka. Si kastaba ha noqotee, marka aysan ku filneyn, cawska dhirta waxaa si xoog leh loo soo saarayaa oo noqonayaa jajab. Tani waxay sidoo kale ka dhacdaa heerkul aad u sareysa qolka oo ubaxa koraya.
Warshad waa in lagu gartaa meel yar oo godan ah, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira la'aanta qoraxda. Gaar ahaan waxaa lagama maarmaan ah in la iska ilaaliyo si toos ah qorraxda on ubax. Laguma talin in loo yeedho calla daaqadda daaqadda, oo ku dhow beteriga. Tani waxay horseedi doontaa kululaynta ubaxa, si xoog leh ayey ufududeyneysaa oo jebinayaan.
Cudurrada faafa ee calla, hababka loo maareynayo iyaga
Sababtoo ah daryeel aan habooneyn ama wax beerashada tayada liidata, calla carrada saboolka ah ayaa u nugul cudurada faafa. Waxay si degdeg ah isu aqoonsadaan: midabka caleenta ee dhirta, calla wuxuu ka baxayaa lakab ama jaale ah, qalajin, afkuna wuu jabaa. Si looga fogaado geerida dhirta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabiyo sababta dawadan iyo qaadashada tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waqtiga.
Anthracnose waa cudur fungal ah calla. Cudurka noocaas ah ee ka mid ah qurxintaas waa mid caadi ah.
Calla anthracnose wuxuu leeyahay astaamaha soo socda:
baro cawlan oo u eg caleemaha caleemaha;
Waqti ka dib, dhibcuhu waxay noqdaan xajmiga weyn, cirbadaha casaanka ayaa ka muuqda geesahooda, iyo caaryada cad ee xarunta;
ka baxayaa qallayl iyo qalalan;
waxay hoos u dhacdaa;
ubaxu waxay ku koraan caajis iyo curl.
Sababaha waxyeelada noocaas ah waa:
heerkulka hawada oo kordhay;
qoyaan badan oo hawo ah iyo carrada.
saar caleemo waxyeelo ah oo ka timid dhirta iyo ciidda
u wareeji geedka ka fog beteriyada;
daaweynta fungicides ("Fundazol", "Fitosporin-M").
Waa muhiim! Fungus waxay u egtahay inay ka gudubto caleemaha si carrada. Sidaa daraadeed, caleemaha la jabsaday waa in isla markiiba laga saaraa. Haddii tallaabooyinka sun-saaridda aysan ku caawin, waxaad u baahan tahay inaad ku baasto ubax, dheriga waa in si fiican loola dhaqo.
Macmacaanka saboolka ah ayaa kobcaya sababtoo ah burburinta calla by fangaska. Iyadoo cudurkan oo kale, ubaxyada caddaanku waxay u muuqdaan caleemaha geedka, oo si dhakhso ah u kordha mugga iyo waqtiga dheeraadka ah ayaa daboolaya dhammaan caleemaha ubaxa. Dibedda, lakabka ayaa la mid ah maaddada burka, kaas oo si weyn u daboolaya dusha calla. Waqti ka dib, qaybaha ay saameeyeen ayaa madow iyo baaba'aan.
saarista caleemo waxyeello leh (haddii aysan ahayn kuwo aad u badan);
Ma taqaanaa? Macdanta macaanka uma baahnid qoyaan badan oo qoyaan, sidaas darteed waxay ku kori kartaa ciidda qallalan. Habka ugu muhiimsan ee ciribtirka uu yahay waa daaweyn saddex-mar ah oo leh fungicides-ka xayeysiisyada (1 jeer toddobaadkii).
Gray calla kalluunka waxaa sababa jacaylka bangiga. Si ka duwan sida anthracnose, kalluunka casaanka ayaa saameyn kara dhammaan qaybaha geedka: caleemaha, jirridda, ubaxa. Caleemaha cirridka ayaa lagu daboolay ubaxyada ubaxyada, iyo dhibco cagaaran oo cagaar ah ayaa ka muuqda ubaxa. Waqti ka dib, qaybta ubaxu waxay heleysaa midab madow oo lagu daboolo ilqabad adag.
waraabin xad dhaaf ah;
beeritaanka carrada faddaraysan;
wax soo saarka beerta.
saar dhammaan caleemaha cudurka qaba;
daaweeyo geedka iyo carrada leh fungicides (Rovral, Fundazol).
Waa muhiim! Fungus waxaa lagu kaydin karaa dhulka si dhowr sano ah, la isugu gudbiyo qaybo cudurka qaba cudurka. Sidaa darteed, baahi ubax culus ee loo baahan yahay in ubax lagu beddelo ciid cusub, iyo midda hore u tuuray. Markaad dhashid ilmaha, u daawee fungicides.
Qanjirta xididka Calla waxaa keena fangaska Fitustor. Astaamaha Cudurada Wacan:
caleemaha iyo ubaxyada qallalan;
dhirta si deg deg ah u daciifiso;
cirifka cawliga waxaa lagu ogaan karaa dhulka;
xididdadu waxay noqdaan kuwo engegan.
heerkulka hawada sare;
bacriminta xad dhaafka ah;
ku-beddelashada ciidda qalalan iyo biyaha marka ugu horeysa ee dhexdhexaad ah;
u wareeji warshad si qabow, si fiican u hawo;
dib-u-eegida dhaqanka quudinta;
fangaska ("Ridomir", "Profit Gold").
Calla jeermiska bakteeriyada waxaa keena bakteeriyada caanaha Erwinia. Iyada oo cudurka, xididka geedka iyo saldhigga caleemaha madow, oo ugu dambeyntii qudhuntii. Dusha sare ee caleemuhu waxay noqdaan jaalle. Warshadu ma qallajinayso, kuwaas oo ay ka mid tahay.
heerkulka sare iyo qoyaanka;
bacriminta nitrogen ee xad dhaafka ah.
Ciribtirka bakteeriyada - kiisku waa mid aad u adag. Waxaa lagama maarmaan ah in ay dhexdhexaadiso waraabinta, geedi socodka geedka fungicides ka dibna ku baddelso carrada caafimaadka leh.
Sidee loola tacaali karaa cayayaanka?
Sida dhir kasta oo nool, cayayaanka ayaa weerari kara calla. Waxay nuugaan dhammaan walxaha waxtar leh ee ka soo baxa geedka, iyaga ku sumo leh qashinkooda, iyo natiijada dhirta way dhimataa. Tallaabooyin ku habboon si loola dagaallamo ba'an ayaa badbaadin doona quruxdaada.
Caarada quudinta lakabka sare ee caleemaha dhirta. Iyada oo la jabiyo calla leh caarada caarada, caleemaha waxay caleemo u rogtaa, iyaga oo u dhexeeya waxaad arki kartaa shabaqa cirro leh. Dhinaca hoose ee caleemaha, dhibco yar oo madow ayaa la sameeyay. Boobsigu badanaa ma baro, qalajiyo oo baaba'o.
Sababaha caarada caarada:
waraabinta ku filan.
qol ku yaal meel qabow;
ciribtirka caleemaha xalka saabuunta ama Neoron, Fufan.
Waxay ku quudiyaan dheecaanka miraha. Iyadoo jabinta calla by cayayaan this, caleemuhu waxay u jeedaa cirridka iyo qalalan, curl, dhibco cad oo sidoo kale u muuqan karaan on iyaga. Si aad uga takhalusto cayayaanka, waxaad u baahan tahay in aad qoydo hawada, gooyso caleemaha saameeyeen iyo daaweeyo dhirta cayayaanka.
Ma taqaanaa? Thrips uma dulqaadan karaan urka naphthalene. Waxay kaloo kaa caawin kartaa cayayaanka.
Aphids waa cayayaanka yaryar (madow, cagaaran, cad ama cawl) kuwaas oo ku quudiya dheecaanka dhirta. Waxay ku sumoobaan wicida qashinka. Badanaa cayayaanka waxay ku yaalaan meelaha hoose ee caleemaha. Calaamadee calaamadaha guuldarada aphids waa huruud ah caleenta, si deg deg ah oo ubax ah. Burooyinkoodii hore ma baro, oo qalaji. Waqti ka dib, dusha sare ee caleemaha waxaa lagu daboolay maro jajab leh.
si ku meelgaar ah u joojiyaan bacarimiso nitrogen;
geeddi-socodka saliidda dhuxusha (20 garaam halkii litir oo biyo diirran la karkariyey) ama diyaar garo gaar ah ("Decis", "Aktara").
Ku guuldareysiga raacitaanka xeerarka daryeelka ee callae waxay keenaysaa guuldaradoodii by cuduro kala duwan iyo bakteeriya. Tallaabooyin lagaga hortago cudurada iyo cayayaanka ayaa ka caawin doona dhirta si ay nolosheeda ugu noqdaan oo ay kuugu farxaan ubax qurxoon.